I-PS5 vs Xbox Series X - Iyiphi i-Gaming Console Engcono Kakhulu? - Amagajethi
I-PS5 vs Xbox Series X - Iyiphi i-Gaming Console Engcono Kakhulu?
I-Xbox ne-Playstation bebengaphansi kwempi engapheli yokunikeza isipiliyoni sokudlala kubadlali. Intuthuko yabo engaguquki ivale izikhala okunzima kakhulu ukunquma ukuthi ikuphi okungcono. Manje futhi, unezidlakela ezimbili zemidlalo ezincintisanayo ukuze zibe intandokazi yakho.
Ama-consoles esizukulwane esilandelayo alungele ukuletha isipiliyoni sokudlala se-hi-fi ngemidwebo ehlukile namanani wozimele wokuguqula. Kodwa-ke, ungahle udideke njenganoma yimuphi omunye umdlalo. Ngaphandle kokuthi ungumphathi oqotho, ungahle uthande ukuqhathanisa lokhu okubili.
Okwamanje, zombili izinduduzo zikwazi ukuhlala ngokulingana. Unomeshi osondelene kakhulu. Ake sithole ukuthi iyiphi ewinayo!
I-RTX 2080 vs GTX 1080
I-PS5 VS Xbox Series X: Isici Sokuhambisana
Umbuzo wokuqala ongangena engqondweni yakho uthi, ‘Ingabe kufanelekile ukuthola i-PS5 noma i-Xbox X?’ Ngemuva kwakho konke, kuthatha isikhathi ukuthi ikhonsoli yokudlala ithole imidlalo ehambisana nayo. Sonke sikubonile ngeziduduzi zangaphambilini zemidlalo. Kodwa-ke, izinkampani eziningi zemidlalo zibheke phambili kwikhonsoli entsha yokudlala futhi ziguqula imidlalo yazo ukuthi ihambisane nayo.
Womabili la ma-consoles anokuhambisana emuva. Ukuhambisana okubuyela emuva kulapho i-console isekela izihloko zemidlalo kusuka kumamodeli wangaphambilini. Kodwa-ke, kukhona umehluko ophawulekayo ekusebenzisaneni okuhlukahlukene. I-Xbox Series X inesandla esiphakeme ngokuxhaswa kokuhambisana kuze kufinyelele kumidlalo ye-Xbox 360. Okwamanje, i-Playstation 5 isekela izihloko ze-PS4 ngokusemandleni.
Eminyakeni ezayo, uma ufuna ukujabulela umtapo wolwazi obanzi wemidlalo ye-Xbox, khona-ke ungazuza kangcono nge-Xbox Series X. Khonamanjalo, i-Playstation 4 iyona engcono kakhulu oyithola ne-PS5.
Ngokuya ngokusebenza, zombili iziduduzi ziyakwazi ukuhlala zilingana. Kunezici ezithile lapho i-PS5 ingcono khona, kuyilapho i-Xbox Series X nayo ilawula ukuhola okunokwethenjelwa. Nakhu ukuqhathanisa okusheshayo phakathi kwalaba bobabili ngokwezincazelo:
I-Playstation 5 I-Xbox Series X
Iprosesa eyinhloko ye-AMD Ryzen 8
I-3.5 GHz CPU
2.23 GHz GPU
Ukulungiswa kwe-8K HD
Imemori engu-825 GB SSD
I-AMD Zen 2 8 Core eyakhelwe ngokwezifiso enamandla we-2x
I-3.8 GHz CPU
1.825 GHz GPU
Imemori ye-1TB SSD
I-Playstation 5 Igxila Kokuhlangenwe Nakho Okugxile
Ukugxila okuyinhloko kwe-Playstation 5 ukuletha isipiliyoni sokudlala sokuntywila. Le nkampani isebenze ngamabomu ukuhlinzeka ngemidwebo emangazayo, ukusebenza komsindo nokulawula.
I-Playstation 5 inikeza ukulandelwa okungcono kwemisebe yehluzo ezicwilisayo. Iziduduzi zemidlalo zisebenza njengekhonsoli ekhethekile enolwazi lokucwiliswa. Uma ungumlandeli weSpatial Audio neDolby Atmos, ungahle uthande Injini Yesiphepho entsha kuPS5 eletha umsindo we-3D.
Isilawuli se-DualSense:Lokhu mhlawumbe yi-ace emgodini wePS5. Ukuze uthole okuhlangenwe nakho okucwiliswa kakhudlwana, bakulethela isilawuli esinempendulo ye-haptic. Manje ungathola ukuzwa kwemvula, ukuhamba ngesihlabathi. Izenzo zomdlalo nazo ziqala impendulo, njengokuhlehla kwezibhamu, noma ukungezwani ngokudonsa intambo noma into efanayo.
I-Xbox Exels Ngokuhambisana Nokusebenza
Uma ungenandaba kakhulu nesipiliyoni futhi uncoma noma yini i-Xbox esivele ikuhlinzeka, khona-ke unomphetho ngokuhambisana. I-Xbox Series X isebenza nabo bonke abalawuli bangaphambilini kanye nenye entsha. Lokhu ukugxumagxuma okukhulu njengoba ukuhambisana kwesilawuli sePS5 kukhawulelwe kuphela kumodeli entsha.
Ngaphezu kwalokho, i-Xbox isebenze ukuqeda i-latency nganoma iyiphi indlela. Ngakho-ke, ikulethela ukusebenza okungcono kakhulu nokusebenza kwegeyimu. Uzoba ne-gameplay ebushelelezi nesipiliyoni.
Qalisa Ngokushesha:Uma ukhuluma nge-ace ye-Xbox Series X, kungahle kube inkinobho elula elula yokuqalisa kabusha. Ikuvumela ukuthi udlale imidlalo eminingi ngokuvala abanye. Asikho isidingo sokuba ugcine umdlalo futhi. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuqala kabusha umdlalo obukade uwudlala bese ucindezela inkinobho. Izokuletha lapho ugcine khona — impela isici esikahle.
Uma ungafuni ukufunda okuningi ngemininingwane, i-PS5 izowina lo mzuliswano. I-Xbox Series X yeMicrosoft inomklamo ofana nebhokisi onetimu yombala omnyama njengokungeza okuyinhloko. Kungabonakala njengokucwebezela okuncane futhi okubushelelezi, kepha kukonke, kubonakala sengathi kuyisikole esidala. Unomklamo ofana nombhoshongo obonakala ufana nama-PC amaningi asuselwa ku-GPU wokudlala.
Ngakho-ke, uma ungumthandi wesikhalazo sesimanje futhi ujabulisa ubuhle, ngeke kulunge kuwe. IMicrosoft izame okuthile okuncane futhi okuqondile. Ngenkathi umhlaba uthanda indlela yokungena ezintweni eziningi ezintweni eziningi, induduzo yokudlala ayiyona enye yazo. Isiphetho se-matte asikhangi ncamashi futhi.
Ngokuqhathanisa, iSony inemodeli ebushelelezi ebukekayo ebekwa ngokuvundlile noma ngokuvundlile. Unomklamo ocwebezelayo onomzimba omhlophe nokugoba phakathi nendawo nombala wayo wesiginesha.
Ngokuya ngesilawuli, akukho ukuguqulwa noma okusha ku-Xbox Series X. Okwamanje, i-PS5 inomklamo we-ergonomic kakhulu onokuthungwa okubukeka kujabulisa kakhulu ngezinkinobho zendabuko ze-PS ezihlanganisiwe.
Sekukonke ngokwedizayini, i-Playstation 5 ingumnqobi ocacile weziduduzo zemidlalo elandelayo-gen njengoba i-Xbox Series X yehluleka ukuletha lowo muzwa wokusha nokuhehayo.
Akubonakali sengathi iMicrosoft inentshisekelo ekunikezeni amahedisethi e-VR noma izinketho kubadlali. Khonamanjalo, i-Playstation 5 isekela amahedisethi we-Playstation VR ngomuzwa wokuntywila. Iphinde igcizelele iphuzu lokuthi abakwaSony bafuna ukunikela ngesipiliyoni semidlalo yokucwilisa esingakaze senzeke ngaphambili. Leyo ngenye indlela yokubheka ukuthi yini ongayilindela kuziduduzi ezintsha zemidlalo. Kodwa-ke, i-Xbox X Series ayinalutho ongayinikeza futhi ishiye phansi, futhi.
Umdlalo wegeyimu usasolisa kakhulu njengoba izihloko ezikhethekile zisakhishwa. Okwamanje, uma uqhathanisa noma yimiphi imidlalo emibili, kungabonakala ngathi yomibili inolwazi nokusebenza okufanayo.
Akungabazeki ukuthi i-Xbox izothatha isicoco uma ufuna ubumnandi bokudlala yonke imidlalo yakho yakudala kusukela ku-Xbox 360. Okubaluleke kakhulu, akudingeki ukuthi utshale kakhulu kunoma iyiphi i-hardware entsha ongayisebenzisa ne-Series X Xbox yakho. Okwamanje, iSony PlayStation 5 ineziqu ezivela kuPS4 futhi ikulethela umuzwa ophawuleka kakhulu.
Kuxhomeke ngokuqinile kulokho okuthandayo nokuthi ulindele ukuthi ikusasa ‘lokudlala libe njani. Uma kungumklamo wesimanjemanje onolwazi lokucwilisa ngokucwilisa isilawuli, i-PS5 kungaba yindlela ohamba ngayo. Kodwa-ke, uma ufuna ulwazi olungenamakhono amancane wokucubungula amandla, i-Xbox Series X ingahle ibe ngcono.
Izilawuli ezihamba phambili ezi-5 ezihamba phambili ze-COD
Yini Oyaziyo Nge-General Hospital Season 59?
I-MLB The Show – Idethi Yokukhishwa, I-Trailer & Ulwazi Lwe-oda Langaphambili!